गाली क-कसलाई गर्ने? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
हामी कहाँको रोग भनेकै पढ्ने पढाउने बेला नेपाली भाषा नै उपेक्षित हुनु हो । प्रारम्भमै उच्चारणमा, लेखनमा राम्ररी ध्यान नदिइनु हो । विषयमा सामान्य जानकारी पनि नभएकाले समेत नेपाली पढाउँछु भन्छ, जिम्मेवारी लिन्छ । दिनेले पनि सहजै दिन्छ, अनि कसरी भाषाको स्तर कायम हुन्छ? कसरी राम्रो सिक्छन् विद्यार्थीहरूले । सरकारी चलन त यस्तै भयो शिक्षकहरूमा पनि त्यस्तै मानसिकता छ, रोग छ । नेपालीमा राम्रो नम्वर ल्यायो भने नेपालीमा पनि किन नल्याओस् त भन्ने? ल्याएन भने नेपालीमा पनि यति थोरै भन्ने !
कतिपय हेड मास्टरहरूले त अंग्रेजी र गणित बाहेक अरूलाई विषय नै गन्दैनन् । कतिपय विद्यालयमा कोचिङ चलाउँदा समेत नेपालीका लागि समय राखिन्न, राखे पनि थोरै मात्र । कोचिङका लागि उठाइएको पैसामा समेत त्यही हिसाबले भागबण्डा हुन्छ ।
मलाई समझना छ— आफ्नो पढाउने बिषय नै नेपाली भएका एकजना प्रधानाध्यापकले एकपटक भनेका थिए ‘म त विद्यार्थीहरूलाई भन्छु— ‘हेर, प्रगति गर्ने हो भने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढ । सामाजिक नेपाली नपढेर, नआएर केही हुन्न’ ।
मैले उनीसँग भनें – आफ्नै विषय, त्यसैका लागि नियुक्ति छ, त्यसकै नाममा तलब आउँछ र पनि यस्तो भन्नुको अर्थ के ? किन यसो भनेको?
उनले भने — पढाउन झ्याउ लाग्छ । त्यसो भनिदिएपछि कम पढाएर, नपढाएर पनि हुन्छ । यी त भए विषय शिक्षकसमेत रहेका एकजना प्रधानाध्यापकका कुरा ।
अर्का एकजना माध्यमिक तहका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीसँग भन्दैथिए — इण्डियन आर्मीमा भर्ती हुनु बिए पास गर्नु बराबर हो । ब्रिटिसमा भर्ती भयो भने त एम ए गर्नु बराबर हो ।
यस्ता प्रसङ्ग धेरै छन् । यस्ता धारणा बोकेका शिक्षक पनि धेरै छन् हामीकहाँ । यी त भए नमूना मात्र ! यस्ता अरू कति भेटिन्छन् कति ! अनि हाम्रो पठनपाठनको स्तर कसरी बन्छ ? भाषाको स्तर कसरी बन्छ?
एक जना निरीक्षक निरीक्षण गर्न जाँदा सधैं भन्ने गर्थे— भोको गोरुले जोत्छ र? जोत्न त अघाउनै पर्छ । यस्तो भन्ने अरू पनि छन्, होलान् । एक जना नेताले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको सम्झन्छु — के गर्ने ? हुने, गर्ने त केही होइन, जनतालाई त देखाउनै पर्यो ।
एउटा क्षेत्रमा होइन, एउटा व्यक्तिमा होइन, यो त हर क्षेत्रमा देखिएको छ । मात्रामा फरक होला तर यस्तो विकृति सबै क्षेत्रमा छ । कसरी सुधार हुन्छ भाषाको, देशको? कुन नीति अख्तियार गरेर हुन्छ? कसलाई जिम्मा दिएर हुन्छ? गाली कसकसलाई गर्नु? नेतालाई, कर्मचारीलाई, शिक्षकलाई, पत्रकारलाई…?
Tagged भाषा शिक्षण विद्यार्थी शिक्षक
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र प्रकरण: यस्तो छ वास्तविकता, बोले परामर्श संगठन
Tags: भाषा शिक्षण, विद्यार्थी, शिक्षक